आँखीभौं बाक्लो कसरी बनाउन सकिन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपायहरु। - VOICE OF NEPAL
२८ असार २०७६, शनिबार ००:३९
487 ??? ???????
धरैजसो मानिसहरु आफु सुन्दर देखिन चाहन्छन् त्यसले त मानिसहरु आफ्नो सौन्दर्यतामा बढी ध्यान दिन्छन् । प्राय युवतीहरुले आफ्नो सुन्दर अनुहारको लागि पहिला पातला आँखीभौं राख्दथे भने अहिले बाक्लो आँखीभौं चाहन्छन ।
तर दुर्भाग्यको कुरा सबैको आँखीभौं बाक्लो हुँदैन । तर यसमा चिन्तितको कुरा भने छैन । किनकी आँखीभौं मोटो बनाउन सकिनेछ त्यो पनि कुनै महँगो कस्मेटिक सामग्री बिना नै, कसरी बनाउन सकिन्छ आँखीभौं बाक्लो ? अपनाउनुहोस् यी उपायहरु :
१.अरण्डी तेलको प्रयोग:
अरण्डीको तेलमा प्रोटीन, भिटामिन, फ्याट्टी एसिड र एन्टीअक्सिडेन्ट हुन्छन् । जसको कारणले रौंलाई पोषण दिएर बढाउँछ ।
नरिवलको तेलले पनि प्रोटीनका साथसाथै भिटामिन ई हुन्छन् । जसले गर्दा आँखीभौंलाई घना बनाएर कालो पनि बनाउन मदत गर्दछन् ।
३.कागतीको रस :
कागतीको रसमा फोलिक एसिडका साथसाथै भिटामिन सी र बी हुन्छन् अनि अनेकौं उपयोगी पोषक तत्व सो कारणले आँखीभौंलाई बाक्लो बनाउँदछ । कागतीको प्रयोग गर्दा भने घाममा निस्कनु हुदैन किनकी कागतीको रसले सूर्यको प्रकाशसँग मिसिँदा कपाललाई सुनौलो बनाइदिन्छ ।
तसर्थ अन्य जैतूनको तेल, प्याजको रस, अण्डाको पहेंलो भाग, मेथीको धूलो, घिउकुमारी र दूधले पनि आँखीभौंलाई घना बनाउँछन् ।